Izifo zentlanzi | Ngeentlanzi
Iintlanzi ziphethwe zizifo Njengazo zonke izilwanyana, ezi zinokunyangwa ukunqanda ukuba zingafi okanye zinqandwe. Isimanga kukuba, ngamanye amaxesha kuyafuneka ukuba uye kugqirha wezilwanyana ukuze ubakhathalele.
Ngamanye amaxesha abantu kholelwa ekubeni ezi zilwanyana azinakho ukusiwa kugqirha wezilwanyana kwaye nangona kunzima, ukuba ungayisebenzisa le nkonzo. Kwesi sithuba uya kufumana ulwazi malunga izifo zentlanzi ephawuleka kakhulu kwimeko nganye, kuhlobo ngalunye ingakumbi ngokunxulumene nohlobo ngalunye lwamanzi okanye nokuba amnandi okanye anetyiwa.
Asinakulibala ukuba kufuneka sibakhathalele kwaye sibathintele ekuguleni, ke ulwazi lolona lwexabiso lwethu.
Xa siqala ukulungiselela i-aquarium ukuze izilwanyana zethu ezincinci zihlale phantsi kweemeko ezilungileyo, kufuneka sazi ubungakanani ...
Xa sine-aquarium yoluntu, enye yeengxaki eziphambili zempilo ezichaphazela iintlanzi ...
Asikokokuqala ukubona intlanzi ijonge phantsi. Hayi, le nto siyithethayo ayenzelwanga ...
por IsiJamani sasePortillo yenzayo 5 iminyaka .
Nangona sibona iintlanzi zethu kwi-aquarium, zikhuselwe ngokubanzi, kude neearhente zangaphandle, izilwanyana ezinokubakho, njl. Nayo…
Ukuxhokonxa ii-cysts kulusu lwentlanzi nakwindawo yayo yangaphakathi yinto esiyaziyo njenge-nodulosis, ...
Isikhwama sokuqubha lilungu le-membranous elimile okwe-sac, elibekwe ngaphezulu kwamalungu amaninzi ...
I-Hexamite yiprotozzo echaphazela ikakhulu iintlanzi zediski. I-hexamite ithatha ithuba lokuba intlanzi i ...
Ezona zifo zibalulekileyo ezinokubangelwa yintlanzi ye-tetra ziiparasites. Ngokukodwa i-parasite eyaziwa ngokuba yi-Pleistophora ...
Uninzi lweentlanzi esinazo kwi-aquarium unokuxela ukuba iyagula ngoku ...
I-betta yintlanzi ethambekele kakhulu kwizifo okanye kwiipathologies ezinokubeka impilo ...
Zininzi izifo kunye neebhaktiriya ezinokuthi zenze isivumelwano kunye nemipupies, nangona kunjalo kukho iinkqubo ezininzi, eziqhelekileyo ...